Adeegsiga qalabka bannaan ayaa si joogto ah u soo saaraysa wax cusub, qalab kala duwan oo dhisme ah ayaa si tartiib tartiib ah u soo galay aragtidayada. Soojiidashada marmar ayaan hoos u dhicin tan iyo wakhtiyadii hore. Marmarka jawiga sharafta leh ayaa qurxiya, sida farshaxanka dabeecadda noqotaa, wuxuu ku dhex milmi karaa dharka guriga oo dhan aad iyo aaddabiici ahaan ku muuji, muuji saafi ah oo cusub oo xor ka ah qurux xumida.
Xullo marble si aad u sameyso darbiga dejinta TV-ga, wuxuu kobcin karaa fasalka qolka fadhiga oo dhan isla markaaba. Waxaa jira qaabab fudud oo faseex ah oo lagu muujinayo dareenka kala saraynta, waxaa sidoo kale jira xididdada kaleidoscopic si loo keeno saameyn muuqaal oo xoog leh.
Jikada iyo maqaayada ayaa ah batariyada ugu badan ee aadanaha ee urta meesha, gees walba waxaa ka buuxa dhadhanka dhabta ah ee guriga. Iyada oo marmar ah si loo yareeyo qaabka booska, si loo qaabeeyo jawi sharaf leh oo jaceyl leh, ayaa u muuqda mid aad iyo aad u badan oo mooddo dhalinyaro ah, oo ay ka buuxdo firfircoonaan.
Dareenka marmarka leh caddad kale oo dhulka cad ku yaal ayaa la mid ah calaamadda khad qulqulaya, taas oo u eg hadhuudhka dabiiciga, samaynta marmarka ayaa booska siinaysa nooc ka mid ah dareenka bilicsanaanta dabiiciga ah.
Musqusha marmar, kuwa gaadha meesha isha ayaa ah dareen fudud oo qaali ah oo qaali ah.Quruxda deegaanka, ama bixinta oo dhan, rafcaanka gaarka ah ee waara ee marmar dabiiciga ah, ayaa mar kaliya ku faafay inuu noqdo mid aad u tiro badan.
Marble qaali ah oo raaxo leh oo leh dabeecado dabiici ah iyo raad raaca waqtiga.Haddii aad rabto guri qurxin badan oo tayo leh waxaad dooran kartaa marmarka qurxinta gudaha.